Ikhabethe Eliphezulu Le-Cliff Elinombono Omangalisayo!
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Carmel
Ukubuka kwesigidi samadola ukusuka kukhabhinethi yesimanje ebekwe phezulu ngaphezu kwezihlahla phezu kwe-Barton Creek. Itholakala endaweni yasemakhaya ebabazekayo kungamakhilomitha ayi-12 kuphela ukuya edolobheni lase-Austin. Ikhabethe elihlukanisiwe liyajabulisa, liyashelela futhi linethezeke kakhulu! Inegumbi lokulala eliphezulu elinombhede olingana nendlovukazi kanye nombhede osofa wendlovukazi othokomele egumbini lokuhlala.
Ukufinyelela eCreek kungendlela yabaqalayo!
Le ndawo yangasese nekhethekile ihluke ngokuphelele endlini enkulu futhi ifinyelelwa ngesango layo.
Indawo isethafeni eliphezulu ngaphezu kwe-Barton Creek ngakho ukubukwa ku-panoramic.
Isango lakho langasese kanye ne-driveway inesikhala sokupaka izimoto ezi-2-3.
Ngifuna nazi kusenesikhathi ukuthi alikho ikhishi eligcwele. Kukhona ikhishi elinefriji, i-microwave kanye ne-toaster-oven. I-toaster isekhabetheni lokuma lamahhala. Isiqandisi sincane kakhulu ngakho nginendawo epholile edeskini yokugcina izinto eziningi.
Kukhona amabhodwe namapani ekhabetheni ngaphezu kwe-microwave angasetshenziswa ku-grill. Lokhu kutholakala kumpheme okukuvumela ukuthi ujabulele ukubukwa okudonsa umoya ngenkathi upheka. Uma kunezinto ozidingayo ekuphekeni kwakho ngizojabula ukukuletha izinto ezinjalo engingezakho ekhabetheni ozolisebenzisa. Ngokwesibonelo omunye umbhangqwana waboleka umpheki wami welayisi
Kukhona izihlalo ezine ngaphakathi noma emphemeni.
4.88(82 okushiwo abanye)
4.88 · 82 okushiwo abanye
Umakhelwane, ngenkathi useduze nedolobha, uzizwa usemaphandleni ngempela. Azikho izibani zasemgwaqweni ezilimaza isibhakabhaka ebusuku. I-Commons Ford Park eLake Austin iseduze, njengekhefi ejabulisayo ebizwa ngokuthi i-Civil Goat. Iqanjwe ngokuhlonishwa kwembuzi ehlala khona ebizwa ngokuthi amaButter! Ungajabulela ubhontshisi wekhofi othosiwe wasekhaya kanye nokudla okumnandi lapho nsuku zonke.
Ngihlala esizeni futhi ngiyajabula ukubhekana nanoma yimiphi imibuzo engase iphakame.